नेकपा निकट ट्रेड युनियनका एक सय जना समाजवादी लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियनमा प्रवेश -
२८ असार २०७६, शनिबार २१:१३ 1841 पटक हेरिएको
काठमाडाैँ – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) निकटको ट्रेड युनियनका केन्द्रीय सदस्य दिपक कटुवालको नेतृत्वमा एक सय जना मजदुर तथा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी नेपाल निकटको समाजवादी लोकतान्त्रिक ट्रेड युनियन महासंघ नेपालमा प्रवेश गरेका छन्।
शनिबार अायाेजित मजदुर तथा कार्यकर्ता प्रवेश कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका प्रदेश नं. ३ इन्चार्ज तथा उपाध्यक्ष गणेश पुडासैनीले समाजवादी लोकतन्त्रिक ट्रेड युनियन मजदुरको पक्षमा शसक्त रूपमा लागेको बताए।
त्यस्तै युनियनमा प्रवेश गरेका मजदुरलाई स्वागत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अर्जुन लम्सालले बिदेशमा रहेका मजदुरहरुलाई मतदानको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा जोड तोडका साथ लागेको बताए। उनले यो सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा नीति कार्यान्वयनमा चुनाैती रहेकाे बताए।
त्यस्तै डा. के.के. राई यो दुई पार्टी एकिकरण भएपछि प्रवेश लहर व्यपाक भएको बताए। नेपालका पुराना पार्टीहरुले आफ्नो काम पुरा नगरेको र यथास्थितिमा सत्ता भोगमा रमाईरहेका जिकिर गरे । प्रतिपक्ष पनि त्यो भाग नपाएर रोइलो गरेको मात्र हो । त्यसैले यो देशलाई समृद्धि तिर लाने सुत्र हामी समाजवादीहरुसंग मात्र रहेकोले आम जनताहरु हामी प्रति धेरै आकर्षित हुन थालेका बताए।
त्यस्तै महासंघ अध्यक्षले आज श्रमिकहरुको प्रवेशले आफुलाई हौसला मिलेको बताए । नयाँ साथीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने बताए । आन्दोलनमा अब तयार रहन पनि आभान गरे । त्यस्तै समाजवादी पार्टीकी उपाध्यक्ष हिसिला यमीले पुँजीवादीहरुले देशको विकास जि डि पि गर्ने गरेको तर यु एन ले मानव विकासको आधारमा समावेशी आधारमा विकासको मापन गर्ने हुनाले हाम्रो यो पार्टी नै अबको एक मात्र वैकल्पिक पार्टी हुने बताईन । त्यस्तै समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष रकम चेम्जोङ्गले नया शक्ति पार्टी र फोरम नेपाल पार्टीको दुई महासंघ अब केही दिनमा एकिकरण हुने बताए ।
त्यस्तै पार्टी सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले हाम्रो पार्टीले अंगिकार गरेको सम्उन्नत समाजवादले मात्र श्रमीकहरुलाई न्याय गर्न सक्ने बताए । न्युनतम बेतनको लागि बारे अहिलेको व्यवस्था ठिक नभएको उनले बताए । अहिले विश्वमा बहु युनियन एक आवाजको रुपमा युनियनहरु अगाडि बढेको उनले बताए ।
त्यसैगरी उपेन्द्र यादवले मजदुरहरुले विगतमा राजनीतिक आन्दोलनमा सकृय भूमिका खेलेको बताए। ट्याक्टरलाई ट्याकं बनाएर राजनीतिक परिवर्तन मुख्य भूमिका रहेको उनले बताए। मजदुरहारुको समानकोलागि आज ठूलो आन्दोलन हुनु पर्ने उनको जिकिर छ। पुराना पार्टीहरुले श्रमका कुरा उठाएर सत्ता प्राप्तीको सिडीमात्र बनाएको उनको भनाइ छ । अब हाम्रो पार्टीले अधुरा रहेका सम्पुर्ण श्रमका समस्यालाई पुरा गर्नुे उनले बताए । उनले भने,’हाम्रो समाजवाद भनेको हुने खानेको हुदा खाने विचको समन्नता । गाउँ र सहरविचको असमन्नताको अन्त्य । दलित र गौर दलित विच समानता नै हाम्रो समाजवाद हो।’